Ergaa baga geessanii obbo Shimallis Abdiisaa – Fana Broadcasting Corporate
Ergaa baga geessanii obbo Shimallis Abdiisaa
Finfinnee, Onkololeessa 29, 2012 (FBC) – Itti aanaan preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan hordoftoota amantaa Islaamaa maraan baga ayyaana Mawliidaan ittiin isin ga’e jedhan.
Hordoftoota Amantaa Musiliimaa Biyya Keessaa fi ala jirtan
Ummata bal’aa naannoo fi biyya keenyaa sirna kabaja ayyaanaa waliin qooddattan
Duraan dursee baga ayyaana moolidaa yeroo 1494ffaaf kabajamu kana nagaan geessan jechuun barbaada.
Ayyaanni moolidaa ayyaanota gurguddoo hordoftoota amantaa Musiliimaatiin kabajaman keessaa isa tokko dha. ayyaanni kun nagaan kan ittiin labsamu, waliin jireenyi kan irratti mirkaneeffatamuufi kan qabu isa hin qabne nyaachisuu fi obaasuudhaan eebba rabbii kan itti qooddatanii dha.
Ayyaanni yaadannoo dhaloota Nabiyyuu Mahaammad sababeeffachuudhaan kabajamu kun duudhaalee kennaa gumaachuu, walii fi biyyaaf kadhachuu fi sirna amantichaa raawwachuun kan kabajamuu dha.
Kabajamtoota hordoftoota amantaa musiliimaa
Har’a kabaja ayyaana yaadannoo dhaloota Nabiyyuu Mahammad sababeeffachuun wayita walitti qabamnu waan hedduu yaadachuu fi mari’achuun keenya hin oolu. Dhangaa qopheeffanne waliin dhandhamachaa, kan nurraa fagoo jiru iyyaafachaa, dhimma fuula duratti nu eeggatu irratti dudubbachuun keenya waan jiraati.
Kaleessi keenya galmee seenaa gaggaarii dubbifamu hedduu qaba. Duudhaalee waliin jireenyaa fi wal kabajaa, jaalalaa fi wal tumsuu hedduu gabbifanneerra. Sirnoota mimmiidhagoo akkasii kanarratti waan manni keenya oomishate qofa osoo hin taane, duudhaaleefi safuu walitti hidhamiinsa keenya cimsu hedduu qooddanneerra.
Sababa kanaaf, sonawwan waliin jireenyaafi wal danda’uu keenyaa taateewwaniifi aggaammiiwwan adda addaatiin osoo hin raafaminiifi hin faalamin har’a ga’aniiru. Sonawwan kanneen lafee dugdaa ijaarsa biyyaafi ummattoota keenyaa ta’anii har’a ga’aniiru.
Nutis, har’a irbuu dhaala dhalootaatu nu harka galeera. Sirnoota gurguddoo kabaja ayyaanota gurguddoo akkasii keessatti raawwannuun walii keenya ittiin yaadanna. Kan rakkateef dirmanna. Harka qalleessa soorra. Kan of harkaa dhabe gargaarra. Kan wal dhabe araarsina. Nagaafi tasgabbii biyyaafi ummattootaatiif kadhanna.
Barmaatileefi gochoota faallaa nageenyaafi waliin jireenyaa balaaleffanna. Dhalootaa fi ol adeemtota gorfanna. Abboommiifi qajeelfamoota amantichaarratti dhaloota ijaaruun duudhaalee gaarii gonfatee akka guddatuuf hojjechuun imaanaa guddaa abboota amantaarratti gatamee dha.
Qajeelfamoota gurguddoo amantaan Isilaamaa ittiin beekamu keessaa dhugaa labsuu, haqa mirkaneessuu, hammeenyaafi jal’ina mormuufi balaaleffachuun hordoftoota amantichaa qofa biratti osoo hin taane, hawaasa hunda biratti duudhaa waloo ta’ee kan fudhatamee dha. Kaleessi keenya sona miidhagaa kana nu dhaalchiseera. Har’as kan ittiin boonnuufi hojjechaa jirruu dha. Kanaafuu, sona amantichaa kan ta’e duudhaan haqummaafi dhugaa dubbachuu kun ijaarsa biyyaafi ummataatiifis qabeenya dhaalaa isa ijoo dha.
Carraa guddaa arganne kanatti fayyadamnee egeree keenya ijaaruuf hojjechuun barbaachisaa dha. Waan qabnu osoo hin tuffatin beekumsa irratti hundoofnee itti fayyadamuun nu ceesisa malee nu hin gufachiisu.
Waan daandiirraa maqe bakkatti deebisuufi hanqina wal hubannaa maqsuunis barbaachisaa dha. Waan hundaan olitti, dhugaa abbaa dhugaatiif eeguufi sababa ga’aa irratti hundoofnee deeggaruu, mormuufi balaaleffachuudhaaf duudhaalee manneen amantaa keessatti gabbifanneen olitti qabeennyi nu tajaajilu hin jiru. Kanaafuu, ayyaanota gurguddoo akkasii kanatti fayyadamnee dhalootaaf dhaamuufi egeree keenya ijaaruun abshaalummaa dha.
Xumurarratti, kan yaaddan akka isiniif milkaa’u, kan soorattan akka isiniif sifaa’u hawwaa, ayyaanni moolidaa kan nagaa, gammachuufi badhaadhinaa akka isiniif ta’u irra deebiin ibsuun barbaada.
Obbo Shimallis Abdiisaa I/A Pirezidaantii MNO